नारायणगढ र पर्सामा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको दुई शाखा विस्तार - Arthakoartha.com
नारायणगढ र पर्सामा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको दुई शाखा विस्तार
काठमाडौं, १५ चैत । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडले एकै दिन दुई वटा शाखा स्थानान्तरण गरेको छ । स्थानान्तरण गरिएका चनौली र दलदले शाखाको बुद्यबार बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेले उद्घाटन गरे ।
नारायणगढ र पर्सामा रहेको तत्कालिन एस डेभलपमेण्ट बैंकको यी दुबै शाखालाई एनआईबिएलले प्राप्ति गरेपश्चात भरतपूर महानगर– २० चनौलीमा र देबचूली नगरपालिका– १४ दलदलेमा स्थानान्तरण गरेको हो । नारायणगढ र पर्सामा एनआईबिएलको पहिले नै शाखा रहेकाले ग्राहकको आवश्यकता र सुविधालाई मध्यनजर गर्दै शाखाहरु स्थानान्तरण गरिएको हो ।
६६ वटा शाखा, चार वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर तथा नौ वटा यातायात सम्बन्धी राजस्व संकलन केन्द्र खोलेको बैंकले आठ लाखभन्दा बढी उपभोक्तालाई ९८ वटा एटिएममार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । ५ लाख ५० हजारभन्दा बढी भिसा डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ता रहेको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि.को ६१ वटा शाखारहित बैंकिङ सुविधाका साथै ३०० बढी भिसा तथा एनपिएन सदस्य बैंकका एटिएम रहेको छ । निजि क्षेत्रमा सर्वाधिक चुक्ता पूँजी रु १०.६२ अर्ब रुपैयाँ रहेको यस बैंकको पुष मसान्तको वित्तिय विवरण अनुसार निक्षेप रु. १ सय ३० अर्ब रुपैयाँ तथा कूल कर्जा लगानी रु. १ सय १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा कठिन हुने भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनायो
लिखुखोला हाइड्रोपावरको शेयर प्रत्याभूतिकर्तामा नागरिक लगानी कोष
माथिल्लो तामाकोशीको मुख्य सुरुङ परीक्षण शुरू, पहिलो युनिटबाट यसै महिनादेखि विद्युत् उत्पादन